Yekuwana dhata yekuwana unit Vagadziri - China Idzi yekuwana unit unit Vanotengesa, Fekitori
Izvi zvinogamuchira murazvo-unodzoreredza isiri-yesimbi simbi, inova yakajeka muhukuru uye iri nyore kuisa; inounganidza chaiyo-nguva yesimba chiratidzo chega yega mita yemagetsi, yezuva nezuva zero-pini yechando simba chiratidzo, uye kuverenga kwemazuva ese zero-point yakaomeswa nechiratidzo chesimba; kure uye kwenzvimbo kurongedza uye query mita kuverenga kuverenga Chirongwa.
DJGZ23-SW10 concentrator ndiyo yazvino yakangwara chigadzirwa chakagadzirwa naSenwei. Iyo inosanganisa yemazuva ano nhare yekutaurirana tekinoroji, komputa tekinoroji, simba rekuyera tekinoroji. Adopt GPRS (CDMA kana wired network) uye yekutarisa master station yekuziva kure kuendesa data, ziva data kuunganidzwa kuburikidza nekukurumidza AD sampling, uye kuziva data kugadzirisa, kudhinda data uye kuchengetedza data kuburikidza nekushanda kwepakati processor.
SW-TCP232-304 is a RS485 serial port server, idiki diki, inobvisika mutengo, ziva RS485 kune Ethernet bhaidhi rekubuda pachena muchiitiko chekuparadzira basa; ine 1 Ethernet port, 10 / 100Mbps chiyero; rutsigiro nguva yekudzorera, DHCP inongotora IP DNS zita rezita kugadzirisa, kure kumusoro kusimudzira, chaiyo serial port basa; Tsigira tsika kurova data kubvisa zvisina basa zvinongedzo; tsika yekunyoresa package kuti uone chinongedzo mamiriro.
SW-GPRS232-734 inzira yeRS485 yekuparadzira simba terminal GPRS DTU, iyo inoziva iyo nzira-mbiri pachena yekuparadzira basa kubva kuRS485 kuenda GPRS; inotsigira GSM / GPRS network kupinda; RS485 redunhu kudzivirirwa kudzivirira, yakasimba inopesana nekukanganisa; inotsigira 4-chiteshi Socket panguva imwe chete online; inotsigira TCP, UDP; tsigirana neSMS pachena Tsigira kudzidzisa kwekutanga kwakaiswa uye yakatarwa yekuraira yakaiswa; tsigira 5-36V upamhi hwemagetsi, DC uye masaridhi emagetsi ekupedzisira.